China IECEE- CB Sevhisi uye Kuyedza | MCM
Chii chinonzi CB Certification hat
IECEE CB ndiyo yekutanga sisitimu yepasi rese yekubvuma kwese kwemagetsi emagetsi chengetedzo bvunzo. NCB (National Certification Body) inosvika pachibvumirano chemarudzi akawanda, icho chinogonesa vagadziri kuwana chitupa chenyika kubva kune dzimwe nyika dziri nhengo pasi pechirongwa cheCB pahwaro hwekuchinjisa chimwe chezvitupa zveNCB.
Chitupa cheCB igwaro rakarongeka reCB rakapihwa neCNB inotenderwa, inova yekuzivisa imwe NCB kuti izvo zvakaedzwa sampuli zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa zvakajairwa.
Semhando yemushumo wakaenzana, mushumo weBB unonyora zvinodiwa kubva kuIEC standard chinhu nechinhu. Chirevo cheBB hachingopa chete mhedzisiro yeese anodikanwa kuyedza, kuyera, kuongorora, kuongorora uye kuongorora nekujeka uye kusiri kusanzwisisika, asi zvakare kusanganisira mapikicha, dunhu dhayagiramu, mifananidzo uye tsananguro yechigadzirwa. Zvinoenderana nekutonga kwechirongwa cheCB, chirevo cheCB hachizoshanda kusvika chazopa chitupa cheCB pamwechete.
'' Nei tichida Certification yeCB?
Zvakanangaly recognized kana approved by nhengo nyika
Iine chitupa cheCB uye CB test test, zvigadzirwa zvako zvinogona kutumirwa kune dzimwe nyika zvakananga.
Chinja kune dzimwe nyika zvitupa
Chitupa cheCB chinogona kushandurwa chakananga kuchitupa chenhengo dzenhengo dzacho, nekupa chitupa cheCB, mushumo wekuyedza uye mushumo wekuyera musiyano (pazvinenge zvichishanda) pasina kudzokorora bvunzo, iyo inogona kupfupisa nguva yekutungamira yechitupa.
Iva nechokwadi chekuchengetedzwa kwechigadzirwa
Chiyero cheCB bvunzo chinotarisa mashandisiro echigadzirwa uye kuchengeteka kunooneka kana chikashandiswa zvisirizvo. Chigadzirwa chakasimbiswa chinoratidza chinogutsa chekuchengetedza zvinodiwa.
● Kufanirwa: MCM ndiyo yekutanga mvumo CBTL yeIEC 62133 standard standard neTUV RH ku mainland China.
● Kugonesa uye kugona kuyedza: MCM iri pakati pechikamu chekutanga chekuyedza uye chitupa chechitatu cheIEC62133 zviyero, izvo zvapedza kupfuura 7000 bhatiri IEC62133 kuyedza uye CB mishumo yevatengi vepasirese.
● Rutsigiro rwehunyanzvi: MCM ine vanopfuura gumi nemashanu mainjiniya ehunyanzvi anoongorora mukuyedza seIEC 62133 standard MCM inopa vatengi vane yakazara, yakarurama, yakavharwa-loop mhando yeruzivo rutsigiro uye inotungamira-kumucheto ruzivo ruzivo.
Pashure: Taiwan- BSMI
Zvadaro: North America- CTIA
Iecee Certification Mutengo
Iecee Certification Maitiro
Iecee Certification Sevhisi
Iecee Nguva Yekutungamira
Iecee technical Zvinyorwa
Iecee technical Chinodiwa
Iecee Bvunzo Zvinhu
Iecee Bvunzo Nzira
Iecee Bvunzo Yekuzivisa
Iecee Kuedza Lab
Iecee Kuedza Laborator
Iecee Kuedza Mutengo
Iecee Kuyedza Service
Iecee Yekuedza Nguva